Shuruudaha iyo Xaaladaha Dooro Your Match |
Shuruudaha iyo Xaaladaha Dooro Your Match
Shuruudaha iyo Xaaladaha :
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon 1aad-7-dii September 2016 GMT.
deposit Ama isticmaalaya Code Promo ah “AMAAL” for a 50% kulan aad ku shubto ilaa qiimaha 25 £
Ama deposit isticmaalaya Code Promo ah “qaraniga ahee” for a 25% aamino ilaa qiimaha £ 500
bonus Tani waxay noqon doontaa firfircoon on your deposit ugu horeysay on maalin kasta xilliga xayaysiis.
horumarinta Tani kaliya ka shaqeysiin karaa mar maalin kasta in muddada xayaysiis.
Shuruudaha iyo Xaaladaha Standard codsan.
Shuruudaha iyo Xaaladaha of Dooro Bonus